किन तपाइँ तपाइँको अर्को विज्ञापन अभियान को लागी एक पेशेवर फोटोग्राफर मा लगानी को आवश्यकता छ - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / असंगठित / किन तपाइँ तपाइँको अर्को विज्ञापन अभियान को लागी एक पेशेवर फोटोग्राफर मा लगानी को आवश्यकता छ
किन तपाइँ तपाइँको अर्को विज्ञापन अभियान को लागी एक फोटोग्राफर भाँडा को आवश्यकता छ
के तपाइँ तपाइँको अर्को विज्ञापन अभियान एक प्रमुख प्रभाव पार्न चाहानुहुन्छ? यदि हो भने, यहाँ किन तपाईले एउटा पेशेवर फोटोग्राफरमा लगानी गर्नु पर्छ।
के तपाइँ पक्का गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाइँको कम्पनीको अर्को विज्ञापन अभियान सफल हुन सक्छ को रूप मा यो संभवतः हुन सक्छ?
यदि तपाइँ हुन लाग्नुभयो भने पोस्टरहरू प्रयोग गर्दै, flyers, ब्यानर, र यसको भाग को रूप मा, तपाइँ दृढता संग एक पेशेवर भर्ती मा विचार गर्नु पर्छ फोटोग्राफर तपाइँलाई उच्च प्रदान गर्नगुणस्तर मूल छविहरु।
तिमी प्रयोग गर्नसक्छौ शेयर छविहरु यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ। तपाइँ पनि लिन को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ फोटो आफ्नै मा। तर तपाइँ धेरै राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ जब तपाइँ संग जानुहुन्छ फोटो त्यो कसैलाई गोली हानिएको थियो जो जान्दछन् कि उनीहरु के गरिरहेछन्।
भाडामा लिदै व्यावसायिक फोटोग्राफर एक अभियान को लागी लागत मा आउनेछ। तर यो एक पटक तपाईंले आफ्नै लागि तयार गरिएको उत्पादन देख्नुभयो भने तपाईंको पक्षमा लगानी गर्न लायक हुनेछ।
आउनुहोस् हामी किन एक पेशेवर मा लगानी गर्न आवश्यक छ मा एक नजिकै हेर्नुहोस् फोटोग्राफर र उनीहरूलाई तपाईंको अर्को अभियान सँगै राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न भन्नुहोस्।
सुरुबाट तपाईंको अभियानको लागि थप फोटो विचारहरू उत्पन्न गर्दछ
जब तपाईं पहिलो सँगै राख्नु हुन्छ विचार एक विज्ञापन अभियान को लागी, यो एक राम्रो योजना संग आउन कोठा मा सँगै गर्न को लागी धेरै स्मार्ट मान्छे प्राप्त गर्न को लागी राम्रो छ।
जब तपाईं एक पेशेवर राख्छन् फोटोग्राफर तपाइँको अभियान मा काम गर्न को लागी, उनीहरु स्पष्ट रूप देखि यस वार्तालाप को एक हिस्सा बन्नेछन् फोटो अभियान को धेरै तरिका मा ड्राइभिंग हुनेछ। र यो अभियान को बारे मा प्रारम्भिक मंथन सत्र अधिक सफल बनाउनेछ।
तपाईंको फोटोग्राफर तपाइँलाई केहि प्रदान गर्न सक्षम हुनेछ विचार को प्रकार को सम्बन्ध मा फोटो उनीहरु तपाइँको अभियान को लागी लिन सक्छन्। तपाइँ जरूरी संग संग जानु पर्दैन विचार तिनीहरू टेबलमा ल्याउँछन्। तर कोठामा अर्को आवाज पाउन राम्रो छ मदत तपाइँको अभियान कस्तो देखिन्छ र कस्तो लाग्छ भनेर तपाइँले अन्तिम निर्णय लिनुहुन्छ।
तपाइँको अभियान लाई धेरै सामान्य खोज बाट रोक्छ
मानिलिनुहोस् कि तपाईंको विज्ञापन अभियानको लक्ष्य भनेको उनीहरू कति खुशी हुनेछन् यदि उनीहरूले तपाईंको उत्पादन वा सेवा प्रयोग गर्न शुरू गरे भने। त्यसैले अभियानको भागको रूपमा, तपाईं हाँस्दै र हाँस्दै गरेको धेरै फोटोहरू समावेश गर्न चाहनुहुन्छ।
तपाईं बाहिर जान र पाउन सक्नुहुन्छ धेरै निःशुल्क स्टक छविहरू हाँस्ने र हाँस्ने मानिसहरुको। तर एक पटक तपाइँको अभियान सँगै राखिएको छ, तपाइँ सम्भवतः पाउन जाँदै हुनुहुन्छ कि यो को कारणले धेरै सामान्य देखिन्छ शेयर छविहरू।
सँग मूल फोटोहरू लिदै मदत एक पेशेवर फोटोग्राफर को, तपाइँ तपाइँको उत्पादन को उपयोग गरेर वा तपाइँको सेवा को लाभ उठाएर मान्छे कब्जा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाइँ पनि उनीहरु बाट वास्तविक मुस्कान र हँसी कैद गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। फोटोहरु तपाइँको अभियान को लागी अद्वितीय देखीनेछ र कम से कम सामान्य देखिने छैन।
तपाईंको अभियानको ग्राहकहरुसंग कनेक्ट हुने सम्भावना बढाउँदछ
तपाईंको विज्ञापन अभियान को लागी लक्षित दर्शक को हो?
त्यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ पत्ता लगाउन आवश्यक छ तपाईंले यो सँगै राख्नु अघि। तपाइँको दर्शकहरूको पहिचान गरेर, यसले तपाइँलाई उनीहरूसँग जडान गर्नको लागि डिजाइन गरिएको अभियान सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ।
तपाइँको श्रोताको पहिचानले तपाइँलाई मूल फोटोग्राफहरू पनि सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ जसले मानिसहरूलाई उनीहरूसँग सीधा कुरा गरिरहेको जस्तो महसुस गराउँदछ। तपाईं आफ्नो पेशेवर फोटोशूटको लागि मोडेलहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको अभियानको साथ लक्षित मानिसहरू जस्तो देखिन्छ।
यो केहि हो कि तपाइँ साँच्चै गर्न सक्नुहुन्न जब तपाइँ संग काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ शेयर छविहरु। तपाइँ, निस्सन्देह, सूट वा बच्चाहरु संग आमाहरु मा व्यापारीहरु को सामान्य तस्वीरहरु को धेरै पाउन सक्नुहुन्छ यदि उनीहरु तपाइँको लक्षित दर्शकहरुको हिस्सा हुन्।
तर प्राय: जसो ती तस्बिरहरूले व्यक्तिहरूको प्रकारको राम्रो प्रतिनिधित्वको रूपमा काम गर्दैनन् जुन तपाईंले आफ्नो अभियानको साथ आकर्षित गर्न खोज्नु भएको छ। एक पेशेवर फोटोग्राफर सक्छ मदत तपाईं यो दूरी पुल गर्नुभयो र फोटोहरूको साथ सेटअप गर्नुभयो जुन तपाईंको कम्पनी र तपाईंको ग्राहकहरूबीच राम्रो सम्बन्ध सिर्जना गर्दछ।
तपाईंको कम्पनीलाई अझ व्यावसायिक देखिने बनाउँदछ
जब व्यक्तिहरू पहिलो पटक तपाईंको विज्ञापन अभियान देख्छन्, उनीहरू के भन्न जाँदैछन्?
तपाइँ उनीहरूले भन्न चाहानुहुन्छ, "वाह, त्यो उत्पादन / सेवा अद्भुत देखिन्छ! म यो प्रयास गर्न चाहन्छु ... "
तर यदि तपाईं आफ्नो अभियानमा मूल फोटोग्राफी प्रयोग गर्नुहुन्न भने, त्यहाँ यसको राम्रो अवसर छ कि उनीहरूले तपाईंको विज्ञापन वा उत्पादन देख्दैनन्। तिनीहरू खराब फोटोहरूमा पनि केन्द्रित हुनेछन् जुन तपाईंले प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुभयो।
तपाईं यसलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं एक अनुभवी पेशेवर फोटोग्राफरको सेवाहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईंको फोटोहरू कत्ति राम्रो देखिन्छन् भनेर मानिसहरूलाई उडाईनेछ, र तिनिहरु लाई तपाइँको उत्पादनहरु वा सेवाहरु को बारे मा के को बारे मा छन् भनेर हेर्नको लागि तपाइँको अभियान मा गहिरो खन्न सक्ने सम्भावना अधिक हुन्छ।
अन्त्यमा, तपाइँको कम्पनी एक धेरै धेरै धेरै पेशेवर देख्नेछन् जब तपाइँ एक फोटोग्राफर द्वारा लिईएको फोटोहरु संग फोटोहरु को लागी तपाइँ तपाइँको आफ्नै मा लिनुभएको छ को बिरुद्धमा जाने छनौट गर्नुहुन्छ। शेयर फोटोहरु। यो एक सम्पूर्ण रूपमा तपाइँको संगठन को लागी सही टोन सेट गर्नुहुनेछ।
तपाईंको फोटो र तपाईंको मिडियामा प्रयोग गर्न फोटोहरू दिन्छ
एकचोटि एक पेशेवर फोटोग्राफरले तपाइँको विज्ञापन अभियानको लागि लिने फोटोहरू प्रदान गर्दछ, तपाइँ तिनीहरूलाई जुन तरिकाले प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुनेछ।
तपाईं स्पष्ट रूपमा आफ्नो अभियान को भाग को रूप मा प्रयोग गर्नुहुनेछ। तर किन त्यहाँ रोक्न?
त्यहाँ धेरै अन्य तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो व्यावसायिक फोटोहरू राम्रो प्रयोगमा राख्न सक्नुहुन्छ। तिमी सक्छौ:
तपाईंको वेबसाइटमा तपाईंको उत्पादन र / वा सेवाहरूको प्रबर्धन गर्न विभिन्न स्थानहरूमा प्रयोग गर्नुहोस्
ब्लग पोष्टहरूमा संलग्न गर्नुहोस् जुन तपाईंले आफ्नो उत्पादनहरू र / वा सेवाहरूको बारेमा सँगै राख्नुहुन्छ
तिनीहरूलाई समावेश गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू र / वा सेवाहरूको लागि सोशल मीडिया पोष्टहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ
तपाइँको पेशेवर फोटाहरू बर्बाद हुन नदिनुहोस्। जबसम्म तपाईं फोटोग्राफरसँग काम गरिसके पछि उनीहरूमा अधिकारहरू हुन्छन्, तपाईंले आफ्नो अभियानको प्रभावकारिता बढाउन उनीहरूलाई प्रयोग गर्न विभिन्न तरिकाहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंले आफ्नो फोटोहरू ट्याग गर्नुभयो भने, तिनीहरूले पनि गर्न सक्छन् तपाईको कम्पनीको वेबसाइटलाई मद्दत गर्नुहोस् जहाँसम्म खोज इञ्जिन अनुकूलनको सम्बन्ध छ। तपाईको वेबसाइट अधिक खोजमा देखा पर्न सक्छ किनकि तपाईले एक पेशेवर फोटोग्राफर को सेवाहरु मा निवेश गर्नुभयो।
तपाइँले सोच्न भन्दा धेरै खर्च गर्नुहुन्छ
त्यहाँ एक धेरै साधारण कारण छ किन धेरै कम्पनीहरु विज्ञापन अभियान को लागी पेशेवर फोटोग्राफरहरु लाई भाडामा नलिन छनौट: लागत। उनीहरु अन्तर्गत छन् छाप कि उनीहरु यो गर्न सक्दैनन्।
यद्यपि यस तरीकाले हेर्नुहोस्। तपाइँ सायद तपाइँको अभियानलाई पहिलो स्थानमा राख्नको लागि पर्याप्त पैसा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँका कर्मचारीहरूलाई भुक्तान गर्नबाट यसलाई भुक्तान गर्नका लागि यो विभिन्न ठाउँमा देखा पर्नेछ, यसले ठूलो लगानी लिने छ।
त्यसोभए किन यो लगानीलाई सफल बनाउन हरेक मौका दिएर नबनाउने?
यो प्रयोग गर्न को लागी एक पेशेवर फोटोग्राफर संग काम गर्न को लागी अधिक खर्च हुनेछ शेयर तपाइँको अभियान को भाग को रूप मा छविहरु। तर यो पैसा राम्रो खर्च हुनेछ जब तपाइँ प्रतिक्रिया देख्नुहुन्छ कि तपाइँको अभियान हुन्छ।
यदि तपाईं फोटोग्राफर भाडामा लिने लागतको बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने, एक फोटोग्राफर फेला पार्न एक वा दुई हप्ताको लागि किनमेल गर्नुहोस् जुन उत्तम मूल्यको लागि मूल फोटोहरू पठाउन सक्दछ। यदि तपाईं केहि उत्खनन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईं इच्छुक उम्मीदवारहरू अप गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई भाग्य खर्च गर्दैनन्।
तपाइँलाई तपाइँको अभियानको सम्बन्धमा पश्चाताप गर्नबाट जोगिन मद्दत गर्दछ
कम्पनीको लागि डिमोरलाइज गर्ने केहि चीजहरू छन् जसमा विज्ञापन अभियानको अन्त्यमा बस्छन् र यो महसुस गर्दैनन् कि सबैले सोच्दछन्। व्यक्तिहरू प्राय: असफल अभियानहरूमा उनीहरूको जागिर गुमाउँदछन् जुन तिनीहरूको कम्पनीहरूको पैसा खर्च गर्दछ।
दिमागमा त्यो साथ, तपाईंले आफ्नो कम्पनीको नजीक भविष्यमा त्यो स्थितिमा आफैंलाई नपाउने कुरा निश्चित गर्न सबै शक्तिहरू गर्नुपर्दछ। यदि तपाइँ एक अभियान सिर्जना गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, यससँग बाहिर जानुहोस् र यसलाई सफल हुनको लागि अवसर दिनुहोस् जुन तपाईं चाहानुहुन्छ।
त्यो अभियान सिर्जना गर्न सहि टोलीलाई सँगै राखेर सुरू हुन्छ। यो धेरै उत्पादन को साथ जारी छ विचार अभियानको लागि र सबै भन्दा राम्रो समूहलाई छान्ने। र यसले सम्पूर्ण अभियानलाई जीवनमा ल्याउन एक पेशेवर फोटोग्राफर राख्नु समावेश गर्दछ।
एक अभियान को लागी एक पेशेवर फोटोग्राफर भर्ती हुनेछैन ग्यारेन्टी सफलता। त्यहाँ एक मौका तपाइँको अभियान असफल हुन सक्छ, मूल फोटो संग वा बिना।
तर एकदम कम्तीमा पनि तपाईले हेर्नु हुँदैन फिर्ता पछि र भन्नुहोस्, "हामीले एक पेशेवर फोटोग्राफर को लागी यो भयानक संग जाने को सट्टामा राख्नु पर्छ शेयर फोटोहरु। " तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँको कम्पनी लाई उत्तम विज्ञापन अभियान को खोज मा सबै स्टपहरु लाई बाहिर निकालेर रात मा राम्रो संग सुत्नुहुनेछ।
तपाइँको विज्ञापन अभियान को लागी अब एक पेशेवर फोटोग्राफर किराया
के तपाईं आफ्नो कम्पनीको लागि एक विज्ञापन अभियान सँगै राख्ने योजना चरणमा हुनुहुन्छ?
तपाईले लाइनमा धेरै टाढा पुग्नु अघि, तपाईले रमाईलो गर्नु पर्दछ विचार एक पेशेवर फोटोग्राफर भाडा को। जब तपाईं यहाँ सूचीबद्ध एकसँग काम गर्ने सबै सुविधाहरू विचार गर्नुहुन्छ, तपाईं बोर्डमा एक ल्याउन असक्षम गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईं यो अभियान समाप्त भएपछि खुशी हुनुहुनेछ। र तपाईं एक झगडा मौका खडा जब यो आउँछ आफ्नो ग्राहकहरु को साथ आफ्नो मूल फोटो संग कनेक्ट गर्न को लागी।
के तपाइँ विज्ञापन सामग्रीमा तपाइँको मूल फोटोहरू छाप्न चाहानुहुन्छ? उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस् हामीबाट आज र हामी तपाईंलाई कसरी कुरा गर्न सक्छौं भन्ने कुरा गर्न चाहन्छौं मदत.
Sh रद्दीटोकरीमा नछोड्नुहोस्: १ Business व्यवसाय कार्ड डिजाइन सल्लाहहरू तपाईलाई कीपरलाई शिल्प बनाउन मद्दत गर्दछ
भीडबाट अलग रहनुहोस्! कसरी तपाईंको सानो व्यवसाय लोगो पप Make बनाउने